Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha barlamaanka oo dalka dib ugu soo laabtay – Radio Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha barlamaanka oo dalka dib ugu soo laabtay
GuddoomiyaGudoomiyaha Baarlanmaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo ay wehliyeen gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylaani Nuur Iikar iyo wasiiru-dowlaha xiriirka baarlamaanka Caadil Sheegow Sagaar ayaa maanata dalka dib ugu soo laabtay kaddib markii uu soo gabagabeeyay howlo shaqo oo uu muddo ay u joogeen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa garoonka Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya,isagoo gacan qaaday mudanayaashii soo dhaweeyay.
Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qeybta nasashada garoonka kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay shirarkii uu uga soo qeyb galay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda.
Mudane Jawaari ayaa sheegay in uu magaalada Kampala kaga qeyb galay shir ay la haayeen guddiga baarlamaanka u qaabilsan sameynta axsaabta siyaasiga ah oo uu dalku yeelanyo iyo shir kale oo ay u dhamaan guddoonka baarlamaanka.
Mudane Jaawari ayaa sheegay in mudadii ay ku sugnaayeen magaalada Kampala ay la kulmeen deeq bixiyaal iyo khuburo ay kala hadleen arrimaha baarlamaanka iyo barnaamijka uu ku shaqeyn doono baarlamaanka kalfadhiga lixaad.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in lix kulan howled ay u qabsoomeen mudadii ay ku sugnaayeen magaalada Kampala ee Caasimadda dalka Uganda,isagoo sheegay in ay guul ku soo dhamaadeen kulan howleedyadaasi.
Imaantinka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari ayaa ku soo beegmaya,xili la filayo in 20-bishan uu furmo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
DHAGEYSO:Warka Duhur ee Radio Muqdisho 09 04 2015